Fampidirana orinasa - Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
Amin'ny maha-orinasa mpiara-miasa Sino-vahiny sci-tech any Shina manokana momba ny R&D, ny famokarana sy ny fizarana ny alikaola, ny Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd., dia natsangana tamin'ny taona 1990 miaraka amin'ny orinasa agar sy karrageenan lehibe kokoa manoloana ny eto an-toerana sy iraisam-pirenena tsena.
Amin'ny alàlan'ny fananganana ny ahidrano avy any Indonezia sy Shina ho akora fototra, ny Fujian Global Ocean dia miankina amin'ny haitao mandroso sy manatsara ny teknolojia fitrandrahana hamokarana ny vokatra avo lenta; ny vokatra lehibe eto aminay dia ny agaren-tsakafo, agar-bakteriolojika, agar tsy mety levona eo noho eo, carrageenan, agaro-oligosaccharide ary ireo vokatra mitambatra ao aminy, hatramin'ny 3000 taonina ny fahaizan'ny famokarana isan-taona. Ny vokatray dia nahazo alalana avy amin'ny ISO, HALAL ary KOSHER, koa afaka mahafeno ny fenitra nasionaly China sy ny fenitry ny EU, ary amidy tsara eran'i Chine ary aondrana any amin'ny faritra Azia atsimo atsinanana, eropeana ary amerikana sns.
Ho fanalahidin'ny fampiroboroboana ny biotechnology an-dranomasina any Shina, ny Fujian Global Ocean dia nanao sy nametraka fiaraha-miasa lehibe sy lalina ary fifanakalozana amin'ireo andrimpanjakana fikarohana siantifika lehibe sy andrim-pianarana ambony eny an-toerana sy any ivelany; ny famokarana matihanina sy ny tsena iraisam-pirenena dia mamela ny orinasa handresy ny dera sy ny fahalalana hatrany ny mpanjifa.
Amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fahatsapana ny andraikitra ara-tsosialy, ny fanaovana hatrany ny zava-baovao sy ny fahombiazana, ary ny fanenjehana ny serivisy tsara indrindra sy tonga lafatra, ny Fujian Global Ocean dia natokana hanome ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany ny vokatra sy serivisy serivisy azo antoka, salama ary tontolo iainana.